Shaqo la'aantii dhallinyarada haysatay oo yaraatay - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Shaqo la'aantii dhallinyarada haysatay oo yaraatay. Foto: TT.
Shaqo la'aantii dhallinyarada haysatay oo yaraatay
Publicerat tisdag 11 november 2014 kl 12.00
Xafiiska shaqada ayaa sheegay in shaqo la’aantii haysatay dhallinyaradu ay hoos u dhacday, inkasta oo wali shaqo la’aan tu saamayn weyn ku leedahay dhallinyarada ku dhalatay waddanka dibaddiisa. Mats Wadman oo ah sarkaal ka tirsan xafiiska shaqada ayaa sheegay in shaqo la’aantii si tartiib tartiib ah ay u soo yaraanayso.
Mats Wadman waxa uu sheegay in dhammaadkii bishii oktoobar ay xafiiska shaqada ku qornaayeen 373 000 qof, taasi oo ka dhigan in tiradaasi 29 000 qof ka yar tahay tiradii xafiiska shaqada ku qornayd sannadkii hore. Waxa soo yaraanaysa shaqo la’aantii, gaar ahaan waxa shaqooyin badan helaya dhallinyarada. Hadda waxa xafiiska shaqada u diiwaan gashan 80 000 dhallinyaro bilaa shaqo ah oo da’doodu u dhaxayso 18 ilaa 24 jir. Waxaanay tiradaasi ka yar tahay tii sannadkii hore 13 000 qof. Waxa sidoo kale xusid mudan in dhallinyarada waddanka ku cusubi u badan yihiin kuwo bilaa shaqo ah oo ku xidhan barnaamijka loo yaqaano Etablering. Sarkaalkan ka tirsan xafiiska shaqadu waxa uu sheegay in dhallinyarada ku dhalata Iswiidhan dibaddeedu yihiin kuwa inta badan bilaa shaqo ah. Inkasta oo ay jiraan kuwo badan oo leh aqoon fiican haddana waxa ay shuruuddu tahay in ay afka Iswiidhishka ku hadlaan iyo in shahaadooyinkooda loo sharcigareeyo.
Bishii hore ee oktoobar shaqobixiyayaashu waxa ay soo bandhigeen 71 000 shaqo oo bannaan. Taasi oo ka badan fursadihii shaqo ee bannaanaa sannadkii hore oo ahaa 50 000. Iyada oo ay sidaa tahay haddana xafiiska shaqadu waxa uu u baahan yahay fursado shaqo oo kale si loo yareeyo shaqo la’aanta jirta. Mats Wadman ayaa dhanka kale sheegay in loo baahan yahay in fursado shaqo laga helo goobaha warshadaha, xarumaha caafimaadka iyo daryeelka iyo guud ahaan laamaha kale ee shaqada. Mats Wadman waxa uu ku dheeraaday in ay shaqo la’aantii soo yaraatay, laakiinse ay haddana ka fikirayaan sida ay u maarayn doonaan 34 000 qof oo xafiiska shaqadu shaqo abuuris u sameeyay oo uu taageero dhaqaale siiyo.
Halka hoose ka akhri warbixin dheeraad ah.